Daad-gure Samsung S21Ultra 3D Muusig buuxa oo Cabbira Muraayada Muraayada Soo-saaraha iyo Alaab-qeybiye | OTAO
● 9H Hardness wuxuu si wax ku ool ah uga ilaaliyaa taleefankaaga gacanta waxyeellooyinka iyo xagashada.
● Wuxuu daboolayaa shaashaddaada oo dhan oo ay ku jiraan geesaha qalooca.
● Xubub rakibid bilaash ah oo fudud.
● Dareemaha jilicsan ee oleo-phobic ee jilicsan ayaa ka hortagaya faraha, iskudhicii wax ku ool ah.
● Muraayadda khafiifka ah ee 'Ultra thin' waxay xaqiijineysaa xasaasiyadda shaashadda asalka ah ee shaashaddaada, taageer hawlgalka furaha faraha ultrasonic.
Qalabka la jaan qaadi kara
Fadlan la soco in 9H ee warshadaha muraayadda kulul ay dhab ahaantii tilmaamayso adkaanta qalinka, oo aan ahayn caan ku ahaanta Mohs (Qalimmada 9H Hardness = Mohs 6H Hardness). Dufcad kasta oo ka mid ah muraayadda qabow ee OTAO waxay u baahan tahay inay ka gudubto imtixaanka adag ee qalin jabinta Mitsubishi 9H.
Rakibaadda filimka xanafta leh ee OTAO waa mid aad u fudud oo ku habboon. Haddii aad tixgelineyso boosteejada, waxaad sidoo kale dooran kartaa codsadeheena (sidoo kale loo yaqaan saxaarad rakibidda) si uu uga caawiyo rakibidda. Xitaa macaamil aan lahayn khibrad filim wuxuu si fudud filim ugu dul dhigi karaa.
Ilaalinta Shaashadda ugu Adag
Muraayadda aluminium-silicate iyo teknolojiyadda xumeynaya ee loo adeegsaday OTAO Muraayadaha Cilmiga leh si loo kordhiyo xiisadda dusha sare ee muraayadda oo jirka oo dhan ka dhigeysa mid xooggan.
Edges la xoojiyay si loo kordhiyo ilaalinta
OTAO Muraayadda Dareysan waxay ilaalisaa geesaha jilicsan iyo geesaha shaashaddaada si looga hortago jajabyada loona joojiyo dildilaaca inuu bilowdo iyo inuu faafo.
Xumbo Bilaash ah & Boor Bilaash ah
Si loo kaydiyo kharashaadka, warshado badan ayaa soo saara deegaan aan boodh lahayn, waana fududahay in boorka lagu dhuuqo badeecada AB xabagta, boodhka qaarna way adag tahay in la helo haddii aanu soo marin baadhitaan tayo leh oo adag soo saarista ka dib, ilaa ay ku dhagan yihiin. Waxaad ka arki kartaa taleefanka, waa goor dambe.
Warshadaha qaarkood waxay isticmaalaan xabagta AB oo tayo hoose leh, goobooyin hawo ah ayaa sidoo kale soo bixi kara.
OTAO waxay qaadataa nidaamyada kormeerka tayada sare leh, laga bilaabo alaabta ceyriinka ah, bay'ada wax soo saarka, habka wax soo saarka ilaa keydka ugu dambeeya, kontaroolada adag, waxayna kuu soo gudbineysaa ilaaliye shaashad muraayad leh oo ka madax banaan boodh iyo xumbo la'aan.
Si xasaasi ah ula jaan qaada 3D Ultra-sonic Sensor
Moodooyinka ugu caansan ee Samsung S10, S20, S21, Note10, iyo note 20 taxane dhammaantood waxay adeegsadaan aqoonsiga faraha faraha ee Qualcomm, kaas oo si weyn u hagaajiya amniga furitaanka. Laakiin sidoo kale waxay keenaysaa caqabado waaweyn warshadaha muraayadda kulul. Waqtigan xaadirka ah, 95% kaaliyaha shaashadda muraayadda muraayadda ee suuqa ma taageeri karo duubista faraha ultrasonic iyo aqoonsiga si aad u wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, ilaaliyaha shaashadda muraayadda muraayadda leh ee OTAO ayaa si weyn loogu hagaajiyay xasilloonida iyo saxnaanta aqoonsiga faraha iyadoo loo marayo cilmi baaris joogto ah iyo horumarin iyo horumarin.
Hore: Samsung S21 Ultra 3D Heat Laabaya Muraayadda Muraayada Muraayadda ah
Xiga: 2.5D Anti Blue Light Fudud Muraayada Muraayadda Muraayadda ee Taxanaha Ipad
iPhone 12 taxane 3D qallooc qallooca muraayad kulul ...
iPhone 12 taxanaha 3D anti bakteeriyada gla ...